समाचार अभिलेखहरू - स्मार्टमे
डोम » श्रेणी 'समाचार' द्वारा संग्रह
रोबरोक S7 आधिकारिक रूपमा पोल्याण्डमा उपलब्ध छ। मूल्य प्रभावशाली छ
10 अप्रिल 2021
roborock, Roborock s7
एक भ्याकुम क्लीनर मध्ये एक जसको लागि हामीले दाँतहरू यस वर्ष सबैभन्दा तिखार्‍यौं, रोबरोक एस now, अब आधिकारिक रूपमा निर्माताको पोलिस वेबसाइटमा उपलब्ध छ। मूल्य यसलाई खरीद गर्न प्रोत्साहित गर्दैन, तर यो अझै पनि लायक छ ...
गुगल पिक्सेल वाच आमन्त्रित भइरहेको देखिन्छ। हामीलाई रिलीज मिति थाहा छ
गूगल, गुगल पिक्सेल वाच, प्रीमियर
गुगलले पहिले नै आफ्नो पहिलो घडी तयार गरिसकेको छ जुन आउँदो हप्ताहरूमा जारी हुनेछ। YouTube मा फ्रन्ट पेज टेक च्यानलमा एक चुहावट पहिले नै देखा पर्‍यो, गुगल पिक्सल वाच र दुबैको उपस्थिति प्रकट गर्दै ...
शाओमीले स्मार्ट स्पिकरको दोस्रो जेनेरेसन प्रस्तुत गर्‍यो
स्मार्ट वक्ता, Xiaomi, xiaomi mi ai स्मार्ट वक्ता
चिनियाँ निर्माताले भर्खर आफ्नो स्मार्ट एमआई एआई स्मार्ट स्पीकरको नयाँ संस्करण प्रस्तुत गरेको छ। यस संस्करणमा, ध्वनि गुणस्तर मात्र सुधारिएको छैन, तर स्मार्ट होममा समावेश गरिएका अन्य यन्त्रहरूसँग एकीकरण पनि गरिएको छ। के गर्छ ...
Spotify एक आवाज सहायक हुन्छ!
स्पोटिफाई, तपाईंलाई राम्ररी थाहा छ, सबैभन्दा लोकप्रिय स्ट्रिमिंग सेवाहरूमध्ये एक हो। उनीहरूको उत्पादनको लागि विकासकर्ताहरूले आवाज सहायक लागू गर्ने निर्णय गरे, जुन हामी "हे Spotfiy" शब्दहरूसँग सम्झन सक्नेछौं। नवीनता र समाचार - हामीलाई यो मनपर्‍यो! केहि आईफोन उपयोगकर्ता र ...
IKEA होम स्मार्ट, समाचार
IKEA चाँडै नै Symfonisk स्पिकरहरूको संग्रह विस्तार गर्ने छ?
8 अप्रिल 2021
ikea, स्मार्ट वक्ता, सोनोस, Symfonisk
IKEA को Sonos संगको सहयोग २०१ 2017 मा घोषित भयो। यसको फल दुई बुद्धिमान सिम्फोनिस्क स्पिकर हुन् जसले मौलिक डिजाइनको साथ व्यावहारिकतालाई जोड्दछ। यस बीच, त्यहाँ धेरै स are्केतहरू छन् कि त्यस्ता उपकरणहरूको प्रस्ताव चाँडै आउँनेछ ...
Apple HomeKit, समाचार
नयाँ आईप्याड प्रो अर्को हप्ता आउँदैछ!
स्याऊ, आईप्याड प्रो, प्रीमियर
भर्खरको जानकारीका अनुसार नयाँ आईप्याड प्रो अर्को हप्ता बजारमा देखा पर्नेछ। यसको बारे जान्नको लायक के छ र हामी नयाँ एप्पल उत्पादनको प्रीमियरबाट के आशा गर्न सक्छौं? प्रीमियर निकट हुँदैछ कंगका अनुसार, एप्पलले ...
आईफोन हराएको वस्तुहरू फेला पार्न सक्षम हुनेछ। केवल ती एप्पलबाट!
एप्पल एयरटागहरु को रूप मा अर्को अभिनव विचार संगै आए, हराएको वस्तुहरु लाई मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको छ। उत्पादनहरू लोकेटर अनुप्रयोग र Findy मेरो प्रकार्य प्रयोग गरेर फेला पार्न सकिन्छ। एप्पल निष्क्रिय छैन, यद्यपि ...
एप्पल टिभी अन्ततः १२० हर्ट्ज समर्थनको साथ?
7 अप्रिल 2021
स्याऊ, एप्पल टिभी +
यो धेरै सम्भावना छ कि एप्पल टिभीको नयाँ पुस्ताले यस छ महिनामा दिनको उज्यालो देख्नेछ। अधिक र अधिक प्रायः भनिन्छ कि यसले १२० हर्ट्जको तस्विर ताजा दरलाई समर्थन गर्दछ। कथित समर्थनमा जानकारी ...
समाचार, शाओमी होम
Perfect 43 उत्तम अवसरहरू शाओमी फ्यान उत्सव मनाउन
मेरो प्रशंसक महोत्सव, Xiaomi
यस वर्ष सबैभन्दा ठूलो सियाओमी प्रचार अभियान हिजोदेखि सुरू भयो। Different 43 बिभिन्न उत्पादनहरू उल्लेखनीय कम मूल्य र आकर्षक सेटमा बेचिनेछ। शाओमी एमएफएफ (मी फ्यान फेस्टिवल) फ्यान उत्सव सबैलाई धन्यवाद दिने अवसर हो ...
Meross स्मार्ट एलईडी प्रकाश पट्टी - लामो नेतृत्व पट्टी को समीक्षा
स्मार्ट होम अप्रिल २०२१ - येल, रियोलिंक, ओकीवुड र CC2021